Ije Ozi Onye Isi Ibu njem nke Turhan - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIje Ozi Onye Isi Iri Turhan Oriri Maka Oriri
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Turkey 0
ozi oriri turhanin
Anyị na-amatawanye ezumike mba ebe ndị iwe na-eme udo, iwe na-abịa na njedebe ma ndị mmadụ na-abịakwute ndị ha hụrụ n'anya. N'oge a, m kelere Mubarak Eid al-Adha n'ekpere m ma chọọ ka ọ bụrụ ụzọ udo, udo na ọganihu nke mba anyị, mba anyị, ụwa Islam na ụmụ mmadụ niile.
Ezigbo Ụmụ amaala,
Ka anyị ghara ichefu na oriri a bụ oge na ohere iji kpuchie ọnyá anyị niile. Maka ezumike bụ ohere iji mee ka òtù ụmụnna anyị dị n'otu, ịdị n'otu na ịdị n'otu. Ememe, ịhụnanya, ọmịiko, iguzosi ike n'ihe, ọmịiko, ịdị n'otu wee ruo ọnụ ọgụgụ kasị elu.
Agbanyeghị, n’ụbọchị ndị a pụrụ iche mgbe mmekọrịta ezinụlọ na-esikwu ike karị, enwere m olileanya na ememme a mara mma ga-eme ka obi anyị andụrịa ọ bụla na obi agaghị agahie ụzọ ndị a ga-eme n'okporo ụzọ. Iji nlezianya na nlezianya karịa ka ị na-agbaso iwu okporo ụzọ mgbe ị na-eme njem; enweghị ụra na ike gwụrụ, ọkachasị n'ụdị ịnya ụgbọ ala.
Site na mmetụta ndị a, ọ ga-amasị m ikele mba anyị dị nsọ maka Oriri nke Àjà.
Ozi nke Minista Transport na Infrastructure Turhan 19 / 08 / 2018 Ezigbo Ụmụ amaala, Anyị ghọtara na ndị obodo ahụ na-emekọrịta ihe, iwe na-agwụsị, ndị mmadụ hụrụ n'anya. Ọ ga-amasị m iji ohere a mee ememe Mubarak's Eid al-Adha na obi nke obi m ma chọọ ka udo, udo na ọganihu nke mba anyị, mba anyị, ụwa Islam na ihe nile a kpọrọ mmadụ. Ezigbo Ụmụ amaala, Ka anyị ghara ichefu na ezumike a bụ oge, ohere iji kechie ọnyá anyị nile. N'ihi na oriri bụ ohere iji mee ka òtù ụmụnna anyị dị n'otu, ịdị n'otu na ịdị n'otu. Ememe bụ ụbọchị mgbe ịhụnanya, ọmịiko, iguzosi ike n'ihe, ọmịiko na ịdị n'otu na-eru elu ya. Otú ọ dị, ejikọtara njikọ ezinụlọ dị iche iche, na n'ụbọchị a pụrụ iche, ọ bụ
Ozi nke Minista Ụgbọ njem Ahmet Arslan na Ememe nke Àjà ahụ 10 / 09 / 2016 Ozi sitere n'aka Minista Ụgbọ njem Ahmet Arslan's Eid al-Adha: Ezumike nke nkwekọrịta nke Küskünler, iwe na ikpochapu bụ N'ụbọchị obi ụtọ a, ụzọ adịghị agbanwe ọbara, ndị ị hụrụ n'anya anaghị enweta akụkọ ọjọọ, ememe gị bụ Bayram Dear Citizens. 12. Mgbe narị afọ nke 19 gasịrị, ndị nna nna anyị mepụtara mmepeanya dabeere na nnwere onwe na ikpe ziri ezi, ebe a na-agbanwe ịhụnanya, ọbụbụeze, akọnuche, na amamihe. Ọhụụ a na-achịkwa nchịkọta obodo
Ozi mbu nke Minista na-ebugharị ndị njem ọhụrụ Turhan 11 / 07 / 2018 Cahit Turhan, onye a họpụtara na Ministry of Transport and Infrastructure, wepụrụ Ahmet Arslan, onye bụbu Minista Transport, Maritime Affairs na Communications. Mgbe ememe ahụ, Transport na Minista Minista Cahit Turhan nyere ozi. N'ihe dị ka July 10, a họpụtara m dịka Minista Ụgbọ njem na Akụrụngwa. Nke mbụ, m ga-achọ ikwu na m maara mkpa na ibu nke ibu ọrụ m ga-ewepụ. Anyị na-amalite oge ọhụụ ma dịka obodo ma dịka Ministry of Transport and Infrastructure. Oge a bụ maka anyị, anyị ga-emezue ọrụ ndị dị ugbu a, ọrụ ọhụrụ Bu
Nchịkọta Mba nke 23 Eprel na Ụbọchị Ụmụaka site na Minista Ụgbọ njem Yıldırım 23 / 04 / 2016 Transportation Minister Yildirim 23 April National Ọbụbụeze na Ụbọchị Ụmụaka Message: Turkey oghere nke mba ọbụbụeze nke Grand National Assembly eze gafere hɑyɑtɑ na nke a dị mkpa ụbọchị Atɑtürk tɑrɑfındɑn mba ọbụbụeze bụ onyinye ka ụmụaka ndị na ga-echebe ruo mgbe ebighị ebi. Ọchịchị Mba 23 Eprel nke Ọchịchị na Ụbọchị Ụmụaka bụ ezumike mba nke na-eburu ihe dị iche iche dị mkpa na ihe dị mkpa na ụzọ pụrụ iche n'ụwa. Ihe abụọ a dị mkpa bụ mba anyị na ụmụ anyị bụ ndị na-akwado ọdịnihu anyị. The spirit nke Republic of Turkey bụ mba ọbụbụeze. Isi iyi nke nnwere onwe, nha anya na ikpe ziri ezi bụ ọbụbụeze na-enweghị atụ nke mba ahụ. Ọdịnihu nke mba anyị bụ Mill
Ozi Minista nke Ụgbọ njem Ahmet Arslan Ramadan Ememe 05 / 07 / 2016 Udo nke disgruntled, ọgwụgwụ nke malaise, anyị na-aghọta dị ka otu mba karịa a oriri na enweta hasretlik ... Mubarak Ramadan na-ejighị egwu mba anyị, islam ụwa na mmadụ niile, udo, udo na obi ụtọ na-ewetara arịrịọ ga-Chineke Pụrụ Ime ... Anyị ọdịdị ala na okwukwe anyị; ịdị n'otu, na-ejide na-eso, na-emeghe, n'agbanyeghị ebe n'ụwa, na-eme ka ọ dị mkpa ịghọta na ihe banyere ndị ogbenye. Ramadan na Eid al-Fitr ike, na-mgbe na enyemaka esịmde ya elu. na bụ ya, ọbụna anyị kasị sie ike ụbọchị nsụhọ nke ịbụ a mba, ịdị n'otu, nkekọrịta, a mba nke na-amaghị otú e si na-ekwu ihe a na-emekpa ha na ndị agbata obi anyị. Ememe, òtù ụmụnna anyị, ịdị n'otu anyị, anyị ịdị n'otu bụ ohere inokota; N'anya, ọmịiko, iguzosi ike n'ihe, ọmịiko, ịdị n'otu ...
Ozi ụgbọ njem onye ozi ụgbọ njem nke Arslan nke 30 August nke Ozi Mmeri 30 / 08 / 2016 Minister nke Transport ọdum 30 August Victory Day Message: Kemgbe ụwa, ịdị n'otu na ịdị n'otu nke anyị ibibi ndị tevessül na bụla n'uche, ụdị ọ bụla nke agha bụ na-akụda mmụọ senti nke mba anyị, 30 August oké mmeri bụ otu ihe dum na na-enweta na Dumlupinar na 1922 kwuru ka ụwa dum . 30 ọnụ The Epic mmeri nwetara August, ntọala anyị Republic, anyị nkịtị nketa, nke a na-tọrọ. Na nke a, 30 August senti nwere nnọọ pụrụ iche ọ pụtaara anyị mba, anyị nkịtị ezumike, otu oge nke mpako maka anyị niile. Taa, ọrụ anyị, ihe nile nke na-egbochi ndị na, n'agbanyeghị ụdị nile nke enweghị ...
Ozi nke Minista Transport Transport Arslan Ramadan 24 / 06 / 2017 Ozi nke Minista nke Ụgbọ njem Arslan Ramadan: Ndị amaala ama, ndị enyi ibe, Grace, ebere na ngọzi, na-ahapụ Ramadan-i-Sharif n'azụ; mba, anyi abiala oriri nke anyi nabatara. Ịhapụ azụ Ramadan-i-Sharif ahụ a gọziri agọzi, ebere, ebere na ngọzi; mba, anyi abiala oriri nke anyi nabatara. N'oge a, m na-eme ememe Ramadan na obi kachasị mma; Enwere m olileanya na ezumike a a gọziri agọzi ga-eme ka anyị bịarukwuo onwe anyị nso karịa mgbe ọ bụla ọzọ, iji mee ka òtù ụmụnna anyị na ọbụbụenyi anyị sikwuo ike. Ememe bụ ohere pụrụ iche maka udo udo, ịhụnanya, ọbụbụenyi, òtù ụmụnna, ịdị n'otu na ịdị n'otu. The ezumike, karịsịa anyị agbata obi na Bayram
Minista Minista nke Ụgbọ njem na nke Akụrụngwa .Cahit Turhan Republic Day Message 29 / 10 / 2018 Taa, anyi nwere obi uto ime ememe ncheta 95 nke Republic anyi na nnukwu obi uto. Taa, mgbe ịdị n'otu nke mba anyị gosipụtara n'ụzọ dị ukwuu, ọ bụ ụbọchị ịmeghachi ụkpụrụ dị elu anyị na-eme ka anyị bụrụ otu mba, otu ala, otu ọkọlọtọ na otu ala nnabata nke nwere ụda olu. Ọ bụ ụbọchị igosi na anyị bụ naanị obi ndị na-elegide ịdị n'otu na iguzosi ike n'ezi ihe nke mba anyị na ọdịmma akụ na ụba nke ụmụ amaala anyị. Mba Republic, nke bu ihe omuma nke mba ndi mba Turkey mere ka ha di elu karia ogbaju nke oge a kemgbe okwuputa ya, abughi isi onu oganihu n'uwa nile na obi ike kachasi ike ime ka ha di n'otu. obodo nke Republic of Turkey na mba ...
UDH Minista Ahmet Arslan na ememme nke ozi 25 / 08 / 2017 Ezigbo Ụmụ amaala, Anyị ghọtara na ndị obodo ahụ na-emekọrịta ihe, iwe na-agwụsị, ndị mmadụ hụrụ n'anya. Ezigbo Ụmụ amaala, Maka afọ 15 ikpeazụ, anyị jikọtara obodo ọ bụla nke mba anyị site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, oké osimiri na ụgbọelu. Ịhụnanya, udo, ọbụbụenyi na-enweta na ọkwa kachasị elu, mmekọrịta ezinụlọ na-etowanye ike na ụbọchị ndị a magburu onwe ha mgbe ha na-eme njem ruo n'ókè kachasị mma iji rube isi n'iwu okporo ụzọ, iji kpachapụ anya, nwee nchekwube; Enwere m ule nke bu eziokwu na anaghi eji ugbo ala n'arughi na ike gwuru. Enwere m olileanya na obi ụtọ nke a mara mma ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ na ebe a na-eme ihe agaghị apụ na ihe ndị mejọrọ n'okporo ụzọ. Nke a ...
Minista nke Ụgbọ njem Ozi Afọ Ọhụrụ Arslan 31 / 12 / 2016 2016 afọ na Turkey na iwu ji obibi ọzọ ajụjụ ridara na akụkọ ihe mere eme dị ka oge. Ezigbo Ụmụ Amaala, Ezigbo ibe, 2016 afọ na Turkey na iwu ji obibi ọzọ ajụjụ ridara na akụkọ ihe mere eme dị ka oge. Ọ bụ ezie na anyị na ọtụtụ ndị na-eyi ọha egwu na-alụ ọgụ n'otu oge ahụ, 15 hapụrụ otu afọ n'afọ Julaị na ihu ọbara nke Fettullah Terrorist Organization, bụ nke kpatara mba anyị na mba anyị egwu. Hamdolsun, mba anyị 15 July n'abalị, na-ahapụ echiche niile nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọdịiche, ọdịdị ndụ, nkwenkwe, echiche, ịhapụ ya site n'iguzogide mgbalị iji gbasaa ubu, ndị omempụ na-eduzi agba ...
Achịcha nke Àjà
Minista Ụgbọ njem
Taa na History: 22 August 1951 Adapazari Railroad
Mara Prozụta Ihe: berkwụ mkpuchi na Çakmak-Ulukışla
Ntụle ụjọ: A ga-enweta ọrụ nchebe okporo ụzọ
Nkwupụta Obi Ụtọ: Nchịkọta Nchịkọta
Ozi nke Minista Transport na Infrastructure Turhan
Ozi nke Minista Ụgbọ njem Ahmet Arslan na Ememe nke Àjà ahụ
Ozi mbu nke Minista na-ebugharị ndị njem ọhụrụ Turhan
Nchịkọta Mba nke 23 Eprel na Ụbọchị Ụmụaka site na Minista Ụgbọ njem Yıldırım
Ozi ụgbọ njem onye ozi ụgbọ njem nke Arslan nke 30 August nke Ozi Mmeri
Ozi nke Minista Transport Transport Arslan Ramadan
Minista Minista nke Ụgbọ njem na nke Akụrụngwa .Cahit Turhan Republic Day Message
UDH Minista Ahmet Arslan na ememme nke ozi
Minista nke Ụgbọ njem Ozi Afọ Ọhụrụ Arslan
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (319) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)